Industry For Sale – Soe San Lynn Real Estate
သုမင်္ဂလာလမ်းမကြီးပေါ်တွင် လူနေ/ ရုံးခန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်သော (18x56)အကျယ်ရှိ ပထမထပ်၊ ကြွေပြားခင်း၊ Hall, ဂျိုးဖြူရေ + အ၀ီစိရေ(၂)မျိုး၊ ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအား ရောင်းရန်ရှိသည်။ ဈေးနှုန်�
အလုံမြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်းမပေါ်ရှိ MMM Condo တွင်သွားလာရလွယ်ကူ၍ ကမ်းနား View ကို ကြည့်ရှု့ခံစားပြီး စိတ်အပန်းဖြေနေထိုင်ချင်သော မိသားစုများအတွက် အထူးသင့်တော်သော (2100Sqft) အကျယ်ရှိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-5,
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏ္ဏ္ဏ္ဏ၊ ပေါ်ဆန်းမွှေးလမ်းအနီးတွင် အကျယ်အ၀န်း - (50x70) မြေအမျိုးအစား - ဂရန်မြေ အမျိုးအစား - မြေကွက်သီးသန့် ဈေးနှုန်း - (3400) သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 09 5185534�
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မလိခအိမ်ရာတွင် အကျယ်အ၀န်း - (28x67) မြေအမျိုးအစား - ဂရန်မြေ အမျိုးအစား - 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်သစ်) ဈေးနှုန်း - (4500) သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ပါရမီ၊ မဉ္ဖူလမ်းတွင် အကျယ်အ၀န်း - (30x80) မြေအမျိုးအစား - မြေပိုင်မြေ အမျိုးအစား - မြေကွက်သီးသန့် ဈေးနှုန်း - (5400) သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၈)မိုင်၊ ပြည်လမ်းအနီးတွင် အကျယ်အ၀န်း - (70x85) မြေအမျိုးအစား - ဂရန်မြေ အမျိုးအစား - 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်) ဈေးနှုန်း - (7400)သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်းမတွင် အကျယ်အ၀န်း - (80x100) မြေအမျိုးအစား - မြေပိုင်မြေ အမျိုးအစား - 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်) ဈေးနှုန်း - (7900)သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဆရာစံလမ်းအနီးတွင် အကျယ်အ၀န်း - (8200Sqft) မြေအမျိုးအစား - မြေပိုင်မြေ အမျိုးအစား - မြေကွက်သီးသန့် ဈေးနှုန်း - 1Sqft (2.5)သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘောဇလမ်းမတွင် အကျယ်အ၀န်း - (80x230) မြေအမျိုးအစား - မြေပိုင်မြေ အမျိုးအစား - မြေကွက်သီးသန့် ဈေးနှုန်း - 1Sqft (3.5)သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 09 5185534၊ 09 5040160၊ 09 5173690
*** ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ရောင်းမည် *** ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းသွယ်တွင် (1750Sqft)အကျယ်ရှိ Masterbedroom(1), Singlebedroom(2), ကားပါကင်၊ ပါကေးခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ေ�
ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း ရောင်�
*** ရန်ကုန်မြို့၏ အချက်အချာကျသော နေရာတစ်ခုတွင် အသင့်နေထိုင်နိုင်သော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ *** ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဆရာစံလမ်းသွယ်ရှိ Grand Sayar San Condo တွင် (2200Sqft)အကျယ်ရှိ Masterbedroom-2, Singlebedroom-2,
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် သွားလားရလွယ်ကူပြီး နေထိုင်ရန်အထူးကောင်းမွန်သော (18x55)အကျယ်ရှိ အိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ရေပူရေအေးစက်(၁)လုံး၊ လေအေးပေးစက်(၃)လုံး၊ မီးအားမြှင�
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မေတ္တာလမ်းမပေါ်ရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း အကျယ်အ၀န်း - (1050Sqft) ဖွဲ့စည်းပုံ - MBR1,BR1,A/C3,Lift, ပါကေး၊ တိုက်သစ် (ပြင်ပြီး)။ ဈေးနှုန်း - (945)သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 09 5012951၊ 09 5185539
*** ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ရောင်းမည် *** လှိုင်မြို့နယ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာရုံလမ်းရှိ Golden Oak Condo တွင် မိသားစုနေထိုင်ရန်အထူးသင့်တော်သော (1500Sqft)အကျယ်ရှိ MBR1, BR2, A/C3, ပါကေးခင�
*** ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ရောင်းမည် *** ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းလမ်း ကွန်ဒို တွင် သွားလာရလွယ်ကူပြီး နေထိုင်ရန်ကောင်းသော (2000Sqft)အကျယ်ရှိ Mesterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C, Lift,ြေ�
*** ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ရောင်းမည် *** ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းလမ်းရှိ စကားဝါကွန်ဒိုတွင် သွားလာရလွယ်ကူပြီး မိသားစုနေထိုင်ရန် သင့်တော်သော (1650Sqft)အကျယ်ရှိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-2, A/C-4, ကားပါကင်ပါ၊ြ�
*** အသင့်နေထိုင်နိုင်သော လုံးချင်းအိမ်အား ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ရောင်းမည် *** - ရန်ကုန်မြို့၏ ဒုတိယစီးပွားရေးဗဟိုဖြစ်လာတော့မည့် မင်းဓမ္မအိမ်ရာအနီး၊ (၉)မိုင်၊ မစိုးရိမ်ကျောင်းလမ်းမပေါ်ရ
လှိုင်သာယာအဆင့်မြင့်၊ ၅ရပ်ကွက် FMI ဘေး Ocean မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမဝင်၊ အနောက်၁လမ်း( မြို့နှင့်အနီးဆုံး) လုပ်ငန်းရဝင်းကျယ် မြေအကျယ် ပေ(၁၅၀x၁၂၀) ၊ အိမ်အကျယ် (၃၀x၄၀) နှ�
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ က(၆)လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းဒဲ့ပေါက် အကျယ် - (20x60) မြေအမျိုးအစား - ဂရန်မြေ၊ MBR1, BR1 ဈေးနှုန်း - (1700)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကြီး၊ မြခွာညိုအိမ်ရာအနီး အကျယ် - (20x60) မြေအမျိုးအစား - (ဂရန်)၊ လုံးချင်းအိမ်(၁)လုံးပါ၊ ကျောင်းနီး၊ ဈေးနီး၊ Citymart အနီး၊ လမ်းသန့် ဈေးနှုန်း - (850)သိန်း (ညှိ�
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီးအနီး အကျယ် - (11½x47) ဖွဲ့စည်းပုံ - ပထမထပ်၊ အလူမီနီယံ Singlebedroom, ပါကေးခင်း၊ မီးဖိုချောင်း၊ အိမ်သာဗိုလ်ထိုင် ကြွှေပြားခင်း/ကပ်၊သံပန်းတပ်ဆင်ပြီး၊ �
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အနော်ရထားလမ်းမကြီးပေါ်၊ 86 ဂိတ်ဟောင်းအနီး အကျယ် - (20x60) မြေအမျိုးအစား - (ဂရန်)၊ 2RC ဈေးနှုန်း - (3200)သိန်း - ညှိနှိုင်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမ၊ စံပယ်ဖြူကွန်ဒိုတွင် အကျယ်အ၀န်း (1750Sqft), MBR1, BR2, A/C6, ရေကူးကန်ပါ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်း - (2000)သိန်း (ညှိနှိုင်း) (အေ
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဦးစံညွန့်လမ်းတွင် မိသားစုနေထိုင်ရန် သင့်တော်သော (25x50)အကျယ်ရှိ ၆-လွှာ (အရှေ့လှည့်)၊ အိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ A/C2, ကြွေပြာခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော တိုက်ခန်းကျ
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အင်ကြင်းလမ်းတွင် အကျယ်အ၀န်း - (40x60) အကြောင်းအရာ - 2RC(နှစ်ထပ်တိုက်)၊ ဂရန်အမည်ပေါက်၊ MBR(6)၊ ပါကေးခင်း၊ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း - (5000)သိန်း (ညှိနိ�
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ပြည်ထောင်စုရိပ်မွန်တွင် အကျယ်အ၀န်း - (60x60) ဖွဲ့စည်းပုံ - 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်)၊ ဂရန်မြေ၊ အိပ်ခန်း (၃)ခန်း၊ A/C ဈေးနှုန်း - (3250)သိန်း ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 01 510950
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မြသီတာအိမ်ရာအနီးတွင် အကျယ်အ၀န်း - (40x60) ဖွဲ့စည်းပုံ - 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်)၊ ဂရန်မြေ၊ အိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ A/C ဈေးနှုန်း - (3500)သိန်း (ညျိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 01 510950
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်းအနီးတွင် အကျယ်အ၀န်း - (50x70) ဖွဲ့စည်းပုံ - 1RC (တစ်ထပ်တိုက်)၊ (မြေပိုင်မြေ)၊ အိပ်ခန်း (၂)ခန်း ဈေးနှုန်း - (2200)သိန်း ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 01 510950
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ အင်းဝလမ်းတွင် အကျယ်အ၀န်း - (40x60) ဖွဲ့စည်းပုံ - မြေကွက် (ဂရန်မြေ)၊ စိတ်ကြိုက်အိမ်ပုံစံဆောက်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်း - (2390)သိန်း ဆက်သွယ်ရန်- 01 510600၊ 01 510950
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဗထူးလမ်းမတွင် အကျယ်အ၀န်း - (60x60) ဖွဲ့စည်းပုံ - မြေကွက် (ဂရန်မြေ)၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင် ဈေးနှုန်း - (3600)သိန်း ဆက်သွယ်ရန် - 01 510600၊ 01 510950
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကန်သာယာအိမ်ရာတွင် အကျယ်အ၀န်း - (65x50) ဖွဲ့စည်းပုံ - မြေကွက်သီးသန့်၊ မြေပိုင်မြေ ဈေးနှုန်း - (4990)သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြားတွင် အကျယ်အ၀န်း - (22x76) ဖွဲ့စည်းပုံ - 2½RC (နှစ်ထပ်ခွဲတိုက်)၊ ဂရန်မြေ ဈေးနှုန်း - (5400)သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်၊ အင်းစိန်လမ်းမအနီးတွင် အကျယ်အ၀န်း - (55x122) ဖွဲ့စည်းပုံ - 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်)၊ မြေပိုင်မြေ ဈေးနှုန်း - (7990)သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ပြည်သာယာလမ်းတွင် အကျယ်အ၀န်း - (50x70) ဖွဲ့စည်းပုံ - 1RC (တစ်ထပ်တိုက်)၊ (ဂရန်မြေ) ဈေးနှုန်း - (7990)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဦးစံညွန့်လမ်းတွင် အကျယ်အ၀န်း - (25x50) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - ၆-လွှာ(အရှေ့လှည့်)၊ အိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ လေအေးပေးစက်(၂)လုံး၊ ကြွှေပြားခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည�
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ (55)လမ်းတွင် အကျယ်အ၀န်း - (12½x50) ဖွဲ့စည်းပုံ - အိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ A/C, ပါကေးခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း - (600)သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 09 5185539၊ 09 5012951
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းမရှိ၊ Diamond Condo တွင် အကျယ်အ၀န်း - (1560Sqft) ဖွဲ့စည်းပုံ - Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C3, Lift, ပါကေးခင်း, ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း - (2200)သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် - 09 5012951၊ 09 5185539
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မဉ္ဖူလမ်းတွင် အကျယ်အ၀န်း - (60x80) ဖွဲ့စည်းပုံ - 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်)၊ MBR(2), BR(2), A/C,ပါကေး, ပြင်ဆင်ပြီး မြေအမျိုးအစား - ဂရန်မြေကွက် ဈေးနှုန်း - (9000)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြားတွင် အကျယ်အ၀န်း - (4200Sqft) ဖွဲ့စည်းပုံ - 3½RC (သုံးထပ်ခွဲတိုက်)၊ MBR(4), BR(3), A/C(8), ပြင်ဆင်ပြီး မြေအမျိုးအစား - ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ဈေးနှုန်း - (25000)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အနော်ရထာအိမ်ရာတွင် သွားလာရလွယ်ကူပြီး ဈေးနီး၊ ကျောင်းနီး၊ ဆေးရုံးနီးပြီး နေထိုင်ရန်အထူးကောင်းမွန်သော (1300Sqft)အကျယ်ရှိ ၃-လွှာ၊ Room Type, Mesterbedroom(1), Singlebedroom(2), A/C(3),Ph, ပါကေးခင်းပြီး အသင�
လှိုင်မြို့နယ်၊ ကန်လမ်းသွယ်တွင် ဈေးနီး၊ ကျောင်းနီး သွားလာရလွယ်ကူပြီး နေထိုင်ရန်ကောင်းသော အကျယ်အ၀န်း - (33x130) ဖွဲ့စည်းပုံ - မြေကွက် (မြေပိုင်မြေ) ဈေးနှုန်း - (6500)သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ သံလွင်လမ်းမပေါ်တွင် နေထိုင်ရန်ကောင်းသော အကျယ်အ၀န်း - (25x50) ဖွဲ့စည်းပုံ - မြေကွက် (ဂရန်မြေ) ဈေးနှုန်း - (3600)သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၃၂)တိုးချဲ့ အကျယ် - (80x60) ဖွဲ့စည်းပုံ - မြေသီးသန့်၊ (ပါမစ်မြေ) ဈေးနှုန်း - (2000)သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)လမ်း အကျယ် - (100x100) ဖွဲ့စည်းပုံ - မြေသီးသန့်၊ (ဂရန်မြေ) ဈေးနှုန်း - (2900)သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ VIP- II္ဏ္ဏ္ဏ္ဏ အကျယ် - (55x60) ဖွဲ့စည်းပုံ - 1BN,(ဂရန်မြေ) ဈေးနှုန်း - (3750)သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ အင်းဝလမ်း အကျယ် - (40x60) ဖွဲ့စည်းပုံ - 1RC, (တိုက်သစ်)၊ (ဂရန်မြေ) ဈေးနှုန်း - (3800)သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ သစ္စာလမ်းအနီး အကျယ် - (40x60) ဖွဲ့စည်းပုံ - 1RC, (ဂရန်မြေ) ဈေးနှုန်း - (3800)သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၉)မိုင်၊ ပြည်လမ်း အကျယ် - (8000Sqft) ဖွဲ့စည်းပုံ - 2RC, (နှစ်ထပ်တိုက်(၂)လုံး)၊ (မြေပိုင်မြေ) ဈေးနှုန်း - (9700)သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်၊ မြကန်သာအိမ်ရာ အကျယ် - (50x60) ဖွဲ့စည်းပုံ - 3RC, (တိုက်သစ်)၊ (ဂရန်မြေ) ဈေးနှုန်း - (11000)သိန်း
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန်(၂)၊ မြေအကျယ်(2.4ဧက)၊ ဂိုဒေါင်(17500Sqft),500KVA ဈေးနှုန်း - 1ဧက (5500)သိန်း
ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၊ မြေအကျယ်(2ဧက)၊ မြေသီးသန့် ဈေးနှုန်း - 1ဧက (5000)သိန်း
၀ါးတရာစက်မှုဇုန်၊ မြေအကျယ်(3.9ဧက)၊ မြေ၊ အုတ်ခတ်၊ ထောင့်ကွက် ဈေးနှုန်း - 1ဧက (2700)သိန်း
ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ မြေအကျယ်(1.5ဧက)၊ မြေသီးသန့်၊ ထောင့်ကွက် ဈေးနှုန်း - 1ဧက (7000)သိန်း
ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်(၃)၊ မြေအကျယ်(1.6ဧက)၊ မြေဖို့ ၊ အုတ်ခတ် ဈေးနှုန်း - 1ဧက (8000)သိန်း
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(၇)၊ မြေအကျယ်(2ဧက)၊ ဂိုဒေါင်အကျယ် (95x95)(2)လုံး၊ 315KVA ဈေးနှုန်း - (10000)သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အင်းစိန်လမ်းမ အကျယ်အ၀န်း - (16x55) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - Singlebedroom -2, ပြင်ဆင်ပြီး၊ ၃-လွှာ ဈေးနှုန်း - (800)သိန်း
တာမွေမြို့နယ်၊ ချမ်းသာဂုဏ်ရောင်ကွန်ဒို အကျယ်အ၀န်း - (1550Sqft) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - Mesterbedroom-1,Singlebedroom-2,A/C3, ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း - (2100)သိန်း
အလုံမြို့နယ်၊ Orchid Condo အကျယ်အ၀န်း - (1800Sqft) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - Mesterbedroom-3, ဘုရား View ဈေးနှုန်း - (3600)သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ဝေဇယန္တာလမ်းမတွင် မြေသီးသန့်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် (40x60)အကျယ်ရှိ (ဂရန်မြေ) မြေကွက်အား ရောင်းမည်။ ဈေးနှုန်း - (11950)သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်၊ လှိုင်ရတနာမွန်အိမ်ရာတွင် သွားလာရလွယ်ကူပြီးနေထိုင်ကောင်းသော (80x75)အကျယ်ရှိ (ဂရန်မြေ) 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်)အား ရောင်းမည်။ ဈေးနှုန်း - (12000)သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြားတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းပြီး နေထိုင်ရန်ကောင်းသော (42x86)အကျယ်ရှိ (မြေပိုင်မြေ) မြေကွက်အား ရောင်းမည်။ ဈေးနှုန်း - (12000)သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ကုန်း၊ မိုးကောင်းလမ်းအနီးတွင် မိသားစုနေထိုင်နိုင်သော (40x100)အကျယ်ရှိ (ဂရန်မြေ) 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်)အား ရောင်းမည်။ ဈေးနှုန်း - (12000)သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရွှေကိန္ဒရီအိမ်ရာတွင် မြေသီးသန့် (90x80)အကျယ်ရှိ (ဂရန်မြေ) မြေကွက်အား ရောင်းမည်။ ဈေးနှုန်း - (18000)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
တာမွေမြို့နယ်၊ လမ်းသန့် အကျယ်အ၀န်း - (12½x50) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - တတိယထပ်၊ Hall ဈေးနှုန်း - (550)သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ဦးထွန်းလင်းခြံ်လမ်း အကျယ်အ၀န်း - (12½x50) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - တတိယထပ်၊ Hall ဈေးနှုန်း - (550)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းစိန်လမ်း အကျယ်အ၀န်း - (25x45) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - BR2,A/C3, ပါကေး ဈေးနှုန်း - (650)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ကြို့ကုန်း အကျယ်အ၀န်း - (18x40) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - ပထမထပ်၊ Hall ဈေးနှုန်း - (700)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးအိမ်ရာ အကျယ်အ၀န်း - (25x35) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - ဒုတိယထပ်၊ BR2, ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း - (700)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
လှိုင်မြို့နယ်၊ လှိုင်မြင့်မိုရ်အိမ်ရာ အကျယ်အ၀န်း - (25x35) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - BR2, A/C2, ပါကေး၊ ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း - (750)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
လှိုင်မြို့နယ်၊ သုခလမ်း အကျယ်အ၀န်း - (13½x50) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - မြေညီထပ်၊ Hall, ထပ်ခိုး (ဆိုင်ခန်းဖွင့်ရန်ကောင်း) ဈေးနှုန်း - (800)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ လမ်းသန့် အကျယ်အ၀န်း - (17x45) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - ဒုတိယထပ်၊ BR1, RC ခင်း ဈေးနှုန်း - (1000)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ငွေကြာယံ အကျယ်အ၀န်း - (18x54) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - မြေညီထပ်၊ Hall, ထပ်ခိုး၊ (တိုက်သစ်) ဈေးနှုန်း - (1250)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းမ အကျယ်အ၀န်း - (15x55) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - မြေညီထပ်၊ Hall, (ဆိုင်ဖွင့်ရန်ကောင်း) ဈေးနှုန်း - (1700)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
လှိုင်မြို့နယ်၊ ပါရမီကွန်ဒို အကျယ်အ၀န်း - (1350Sqft) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - MBR1,BR2,A/C4, Lift, ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း - (1000)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကွန်ဒို အကျယ်အ၀န်း - (25x55) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - MBR2, ပါကေးခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း - (2000)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်ကွန်ဒို အကျယ်အ၀န်း - (1350Sqft) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - MBR1,BR2,A/C, Lift, ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း - (2300)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
လှိုင်မြို့နယ်၊ ရွှေပါရမီကွန်ဒို အကျယ်အ၀န်း - (2070Sqft) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - MBR1,BR2,A/C4, Lift ဈေးနှုန်း - (2700)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ Junction မော်တင်တွင်မိသားစုနေထိုင်ရန်ကောင်းသော အကျယ်အ၀န်း - (1550Sqft) အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ - MBR2,BR1,A/C4, Lift, ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း - (3500)သိန်း (ညှိနှိုင်း)
ဗဟန်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ လုံးချင်းအ�
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းအနီး တွင် မိသားစုနေထိုင်ရန်အထူးသင့်တော်သော အကျယ်အ၀န်း(40x60)အကျယ်ရှိ (မြေပိုင်မြေ), 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်) လုံးချင်းအိမ်အား ရောင်းရန်ရှိသည်။ ဈေးနှုန�
လှိုင်မြို့နယ်၊ လှိုင်မြင့်မိုရ်အိမ်ရာတွင် မြေသီသန့်စိတ်ဝင်စာသူများအတွက် အကျယ်အ၀န်း (70x70)အကျယ်ရှိ (ဂရန်မြေ) မြေကွက်အား ရောင်းရန်ရှိသည်။ ဈေးနှုန်း - (12000)သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၄၁)တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ တော်ဝင်လုံးချင်းအိမ်ရာတွင် မိသားစုစိတ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်သော (100x100)အကျယ်ရှိ နှစ်(၆၀)ဂရန်မြေကွက်၊ 2½RC (နှစ်ထပ်ခွဲတိုက်သစ်) လူမ�
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းအနီးတွင် မိသားစုနေထိုင်ရန် အထူးသင့်တော်သော အကျယ်အ၀န်း (40x60)အကျယ်ရှိ (မြေပိုင်မြေ) 2RC (နှစ်ထပ်တိုက်) အား ရောင်းရန်ရှိသည်။ ဈေးနှုန်း - (6450)သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းမအနီးရှိ မစိုးရိမ်ကျောင်းလမ်းမပေါ်တွင် မင်းဓမ္မအိမ်ရာနီး၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်နီး၊ Ocean Super Market နီး၊ ၀ိတိုရိယဆေးရုံများနှင့်နီးပြီး မိသားစုနေထိုင်ရန်ကောင်းသော
-လိပ်စာ : လှိုင်မြို့နယ်၊ ပါရမီကွန်ဒို
-အိမ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ : စတုရန်းပေ (1350) ကွန်ဒို၊ Lift ၊ 2BR ၊ 1MBR ၊ အဲကွန်း၊ ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေထိုင်ပါသည်။ -
လှိုင်မြို့နယ်၊ အေးရိပ်မွန်လုံးချင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ စကားဝါမြိုင်ကွန်ဒိုတွင် ဈေးနီး၊ ကျောင်းနီး၊ ဆေးရုံနီးပြီး မိသားစုစိတ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်သော (1350Sqft) အကျယ်ရှိ Mesterbedroom-1,
Can contact to our ' Soe San Lynn Real Estate Service ' for systemly service to real estate service of the whole fo Yangon in completely. Our slogan of ' One contact for life of Soe San Lynn Service ' as we would Like to service to you for satisfy. Continue Reading
Address: No.70, First Floor, Insein Road, San Yeik Nyein Bus Stop, Kamaryut Township.